Pinos dagbok - somaliska: Pinos cirkus - UR Skola
Kani waa Biino,
kaalaya sirkooska Biino.
iyo bakaylihii ayaa tigidho iibsaday.
Koox ayaa musiik tumaysa.
Binifiinka ugu xoog badan aduunka.
Hadana fardihii ayaa ordaya.
Hokus, pokus, filiokus!
Eega waa sixiroole.
Maxaa ugu jira koofiyada.
Baraawo heer sare.
Hada waa in lawada aamuso waxaan
samaynaynaa wax adayg badan.
Xarig ayay ku socdaan kuligood.
Binifiinka kubad ayuu
sanka ku dheelitirayaa.
Biino kubado yar yar
ayuu is dabo marinayaa.
Hada sirkooskii wuu dhamaday
daawadayaashii ayaa sacbinaya.
Sirkooskani waxa uu ahaa
kii ugu xiisaha badnaa.
Björnar, Cirkus, Fiktiva berättelser
Se på fler program om Modersmål och minoritetsspråk för förskola (801 st)
Lyssna på fler program om Modersmål och minoritetsspråk för förskola (295 st)